ကမ္ဘာတလွှား အဆိုးရွားဆိုး လူဆိုးဂိုဏ်းများ - Thutazone
ကမ္ဘာတလွှား အဆိုးရွားဆိုး လူဆိုးဂိုဏ်းများ
By ThutammPosted on November 19, 2018 November 19, 2018
ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ(သုတစွယ်စုံ)
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျောက် ဂိုဏ်းပေါင်းများစွာကို ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ခဲ့ကြရာ အချို့သော ဂိုဏ်းများသည် ကနဦးတွင် ကောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခဲ့သည့်တိုင် မသမာမှုများဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဒုက္ခပေးသည့် အဆိုးရွားဆုံး အရာများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းဂိုဏ်းများအနက် နိုင်ငံတကာ၏အာရုံစိုက်မှုကို အခံရဆုံးနှင့် အန္တရာယ် အကြီးမားဆုံးဂိုဏ်း ၉ ဂိုဏ်းကို ၂၁၀၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သွေးများဟု အမည်ပေးထားသည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ယင်းဂိုဏ်းကို အုပ်စုများ ခွဲခြား ထားကာ အုပ်စု တစ်ခုစီသည် မိမိတို့အတွက်ချမှတ်ထားသည့် အထူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြရသည်။အုပ်စုတိုင်းတွင် အဖွဲ့ဝင်သစ်များရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိခဲ့သည်။ ယင်းဂိုဏ်း၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ယင်းတို့ ၀တ်ဆင်ထားသည့် အနီရောင် လည်စည်းပ၀ါနှင့် အနီရောင် အ၀တ် အစားများ ဖြင့် ခွဲခြားကြသည်။
သွေးဂိုဏ်းဝင် တစ်ဦးသည် အနီရောင်ကိုသာ ၀တ်ဆင်ရပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်ဟန်ခြေဟန်များဖြင့် ခွဲခြားကြ သည်။ ယင်းတို့ ပြောပုံ ၊ကျောက်မျက်များ ၀တ်ဆင်ထားပုံ နှင့်ဆေးမင်ကြောင် ထိုးထားပုံတို့ကို ကြည့်ကာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အသိအမှတ်ပြုကြသည်။သွေးဂိုဏ်းသည် များစွာသော ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကာ အမေရိကန်ပြည်သူ များ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။.အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွေးဂိုဏ်း၏ သြဇာသည် အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေး အပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
၈. Los Zetas
စစ်ဘက်ရေးရာ နောက်ခံပါရှိနေသည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုသည် အဖွဲ့ဝင်များကို ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပေးထားပြီး အဆင့် မြင့် နည်းပညာများကို သုံးစွဲကာ အလွန်ခြေခုံလက်လုံရှိခဲ့သည်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် အခြေချကာ လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ယင်းဂိုဏ်း သည် မက္ကဆီကို တပ်မတော်မှ ထွက်ခဲ့ရသည့် ရာဇ၀င် လူဆိုးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Los Zetas ဖြစ်သည်။အစပိုင်းတွင်Los Zetas သည် ပင်လယ်ကွေ့မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်ကို သစ္စာ ဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်။ယင်းအချိန်မှစ၍ Los Zetas သည် များစွာသော အစိုးရအဖွဲ့များ၏ အထိတ်လန့်ဆုံး ဂိုဏ်း တစ်ခုဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
ခေတ်မီလက်နက်များတပ်ဆင်ထားသည့် Los Zetas သည် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အန္တရာယ် ကြီးမားသော ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် ယင်းဂိုဏ်းကို ကိုင်တွယ်ရန် ခက်ခဲခဲ့သည်။ယင်းအဖွဲ့သည် လုပ်ကြံသတ် ဖြတ်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေညှစ်ခြင်းအပါအ၀င် ရာဇ၀တ်မှုများစွာကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ဂိုဏ်းသားများသည် အော်တိုမက်တစ် လက်ကိုင်သေနတ်များမှသည် လောင်ချာများအထိ ကိုင်ဆောင်ကာ တိုက်ခိုက် မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေသည်။
၇. Aryan Brotherhood
AB ဂိုဏ်းဟု ထင်ရှားသည့် Aryan Brotherhood အဖွဲ့သည် ရက်စက်သော ထောင်တွင်းဂိုဏ်းများအနက် တစ်ခုဖြစ် ကာ ထောင်နံရံပြင်ပတွင်လည်း ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ AB ဂိုဏ်းကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ထောင်စနစ်များကို မြေလှန်ခဲ့သည့် ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။ဂိုဏ်းသားများသည် အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၀၀ ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရကာ ယင်းတို့ သည် အကြင်နာတရားကင်းမဲ့၍ ရက်စက်ကြမ်း ကြုတ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။
ဂိုဏ်း၏ ဆောင်ပုဒ်ကိုပင် သွေးဝင် သွေးထွက်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြကာ မည်သည့် အရာကိုမဆို နယ်မြေ အကန့်အသတ်မရှိဘဲ သွေးဆာနေသူများဟု ထင်ရှားခဲ့ သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုများ၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် AB ဂိုဏ်းသားများကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများ ဖြစ်သဖြင့် ယင်းဂိုဏ်းသည် မည်မျှ ကြောက်ဖွယ်ကောင်းကြောင်းပြဆိုနေပေသည်။
၆. 14K Triad
တရုတ်နိုင်ငံတွင် စတင်အခြေချခဲ့သည့် 14K Triad ဂိုဏ်းသည် အခြားနိုင်ငံများသို့ပါ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခဲ့ကာ လူအများ အပေါ် သြဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။ယင်းဂိုဏ်းကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၍ ဂိုဏ်းချုပ်ပုဂ္ဂိုလ် ကျေနပ်မည့် အဆိုးဆုံး နေရာအ ထိ သွားနိုင်ကာ ယင်းတို့ လုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်နိုင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ယင်းဂိုဏ်းကို တရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ထူထောင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် အင်အားကောင်းလာခဲ့ကာ ဂိုဏ်းသား ၂၀၀၀၀ အထိရှိလာခဲ့သည်။
14K Triad ဂိုဏ်းသည် ပြည့်တန်ဆာ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လက်နက်ကိုင် လုယက်ခြင်း၊မော်တော်ယာဉ်များ မှောင်ခို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊လူနှင့် လက်နက်မှောင်ခိုကူးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ခြင်းစသည့် ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်သည်။ ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည့် အချက်မှာ ယင်းဂိုဏ်းသည် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းများကို ဦးစွာရရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မဖမ်းမီ သတင်းရနေသဖြင့် ဖမ်းဆီး၍ မရနိုင်ခဲ့ချေ။
အာဖရိက အမေရိကန် လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Crips သည် တစ်ချိန်က Baby Avenues ဟု ထင်ရှားခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင် တည်ရှိသည့် ယင်းဂိုဏ်းသည် ဂိုဏ်းဝင်ပေါင်း ၃၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာ၌ပင် အပြင်းထန်ဆုံးသော လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Crips သည် လူသတ်ခြင်း၊မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း၊အလစ်သုတ်ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်လေ့ရှိကာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး လူဆိုးဂိုဏ်းများ တွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
၄. Latin Kings
ရှီကာဂိုမြို့တွင်အခြေစိုက်၍ စပိန်စကားပြော လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံသားများ Hispanic People) ဖြင့် အများဆုံး ဖွဲ့စည်းထားသည့် Latin Kings ဂိုဉ်းသည် မူလဖွဲ့စည်းစဉ်က ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်များရှိခဲ့သည်။ဂိုဏ်း၏ ရည်ရွယ် ချက်သည် ယင်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။သို့သော် အခြားသော အတွေးမှားများဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက် ရည်ရွယယ်ချက်များ ပျက်စီးခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် Latin Kings သည် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၄၃၀၀၀ ရှိသည့် အရက်စက်ဆုံး လူဆိုးဂိုဏ်းအဖြစ် ရပ်တည်နေ သည်။ဂိုဏ်းသားများသည် အချက်ပြ သင်္ကေတများဖြင့်သာ ဆက်သွယ်ကြသဖြင့် မိတ်ဆွေဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားနိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့သည် အခြားသော နာမည်အဆိုးဆုံး ဂိုဏ်အချို့၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ အတူ အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်။ယင်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှသည် ကြီးမားသော သွေးစွန်းမှုများဖြင့်အဆုံးသတ်လေ့ရှိကာ ဂိုဏ်း၏ငွေကြေး ကို မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချခြင်းမှ အများဆုံးရရှိသည်။ဂိုဏ်သားများသည် အနက်နှင့် ရွှေရောင်ပါသည့် အ၀တ်များကို ၀တ်ဆင် လေ့ ရှိကြသည်။
၃. 18 th Street Gang
Barrio 18 ဟုလည်းကောင်း၊ Marra 18 ဟု လည်းကောင်း ထင်ရှားသည့် 18 th Street ဂိုဏ်းသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် အင်အား ၆၅၀၀၀ ရှိသော ဂိုဏ်းကြီးဖြစ်သည်။ယင်းဂိုဏ်းကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များက လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ဂိုဏ်းဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်များအတွင်း မက္ကဆီကိုနှင့် ဗဟိုအမေရိကသို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
18 th Street ဂိုဏ်း၏ အဓိက လုပ်ငန်းများတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊လူသတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ပြန်ပေးဆွဲမှုနှင့် ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်း မှုများပါဝင်သည်။ များပြားလှသည့် ဂိုဏ်းဝင်များအချင်းချင်း အင်္ကျီတွင် ဖိထားသည့် ၁၈ ဂဏန်း အရာဖြင့် သိရှိကြသည်။ယင်းဂိုဏ်း သည် လူငယ်များဖြင့်သာစုစည်းထားသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အဆိုးဆုံး ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂. Mara Salvatrucha
လက်ရှိအချိန်တွင် ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုသည် အယ်လ်ဆာဗေဒိုးနိုင်ငံ တွင်ရှိနေသည်။ယင်းတို့၏ သြဇာသည် အယ်လ်ဆာဗေဒိုး အစိုးရအဖွဲ့ထိ ရောက်ရှိနေကာ လူဆိုးဂိုဏ်းက အစိုးရ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသဖြင့် အလွန်ကြောက်ဖွယ်အနေအထားဖြစ်ခဲ့သည်။သို့ဆိုလျှင် ပြည်သူများက မည်သူက အကာအကွယ်ပေးမည်နည်းဟု မေးလာ ဖွယ် ရှိခဲ့သည်။
ယင်းလူဆိုးဂိုဏ်းကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်လိစ်မြို့တွင် အယ်လ်ဆာဗေဒိုး နိုင်ငံ မှ ၀င်ရောက်လာသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ သစ္စာခံ အဖွဲ့ဝင် ၇၀၀၀၀ အထိရှိခဲ့သည်။ယင်းတို့အနက် ဂိုဏ်းဝင် ၁၀၀၀၀ ခန့်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လှုပ်ရှားနေကြ ပြီး ယင်းဂိုဏ်း၏ ထင်ရှားသည့် အမည်သည် MS 13 ဖြစ်သည်။ယင်းဂိုဏ်းသည် အရာရာကို အလေးအနက်ထားကာ လုပ်ဆောင် လေ့ ရှိပုံကို ယင်းတို့၏ စစ်သင်တန်းတွင်မြင်တွေ့ရပေသည်။ယင်းတို့သည် တောခုတ်ဓားများနှင့် လက်ပစ်ဗုံးများကိုသုံးကာ တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသည့် ယာကူဇာဂိုဏ်းသည် အလွန်ပင်ရှေးကျခဲ့ကာ ဂိုဏ်းဝင် ၁၀၂၀၀၀ ရှိ သည်။ ဤမျှ များပြားသော အဖွဲ့ဝင်များကြောင့် ယာကူဇာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ရာကူဇာ ဂိုဏ်းသို့ ၀င်လာသူ တစ် ယောက်သည် မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးများကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာ ဂိုဏ်းကိုသာ သစ္စာခံကြရသည်။မိသားစုနှင့် ပြန်လည် ဆက်သွယ်သည့် ဂိုဏ်းသားသည် သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ထိုသူကို သတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ဂိုဏ်းသားများ အားလုံးကို သုတ်သင်လိုက်နိုင်လျှင် ဤကမ္ဘာသည် နေချင့်စဖွယ်နေရာဖြစ်လာမည်ဟုပင်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ယာကူဇာတို့မရှိလျှင် လူကုန်ကူးမှုများ၊သေနတ်မှောင်ခိုမှုများ၊မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုများ၊လုပ်ကြံမှုများ၊ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ငွေ ကြေး ခ၀ါချမှုများနှင့် အခြားရာဇ၀တ်မှုများ ရှိတော့မည်မဟုတ်ဟု ယူဆမှုများပင်ရှိလာခဲ့သည်။သို့သော် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အသီးသီးအတွက် ယာကူဇာများသုတ်သင်ရေးသည် ကြီးမားသော စိမ်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်နေပေသည်။ ယာကူဇာတို့၏ ကွန်ရက်သည် အလွန်ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ကာ အချို့သည် ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းထိ ထိုး ဖောက် ၀င်ရောက်နေပေသည်။
ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ကမ္ဘာကြီးကို တည်ဆောက်ရန် နိုင်ငံတိုင်းက ကြိုးပမ်း နေ ကြသော် လည်း လူသားများအား ခြိမ်းခြောက်အန္တရာယ်ပြုနေသည့် လူဆိုးဂိုဏ်းများကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းသည့် ကမ္ဘာဖြစ်လာရန် များစွာံ အလှမ်းဝေးလျက်ရှိနေပေသည်။
( ဒီစာရင်းမှာ လူသိများတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်းမပါဝင်ပါဘူး။ မာဖီးယားဟာ တစ်ဂိုဏ်းတည်းရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အမေရိကန်မာဖီးယား ၊ ရုရှားမာဖီးယား ၊ စစ္စလီကျွန်းမာဖီးယား စသည်ဖြင့် တစ်သီးတခြားဂိုဏ်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြလို့ပါ။ မာဖီးယားဂိုဏ်းအကြောင်းကိုတော့ ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်)
Top9Most Dangerous Gangs in The World
မောင် သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ
Posted in KnowledgeTagged world knowledge
Previous post စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အသားစားပင်များအကြောင်း
Next post ပင်လယ်ကြီးရဲ့ ၀ါးမြိုခြင်းကို ခံနေရသော နိုင်ငံလေး